NASA သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီ | တွင်းနက်၏ ပထမဆုံး ပုံရိပ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 16/05/2022 12:00 | နက္ခတ္တဗေဒ
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်က Event Horizon Telescope (EHT) ၏ သိပ္ပံအသိုက်အဝန်းသည် အိမ်နီးချင်း နဂါးငွေ့တန်း M87 တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော တွင်းနက်တစ်ခု၏ ပထမဆုံးဓာတ်ပုံဖြင့် ကမ္ဘာကို အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ယခု တူညီသော အဖွဲ့သည် ပထမဦးဆုံး အကြိမ် တိုက်ရိုက် မြင်သာ သာဓကများကို ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီရှိ တွင်းနက်၏ ပထမဆုံးပုံဖြစ်သည်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်များ၏ ကွန်ရက်မှ စူးစမ်းလေ့လာမှုများကို အသုံးပြု၍၊
ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီရှိ တွင်းနက်ပုံတစ်ပုံကို မည်သို့ရရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတွင် သက်ရောက်မှုများရှိသည်ကို ပြောပြပါမည်။
1 ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီရှိ တွင်းနက်၏ ပုံကို ရိုက်ယူပါ။
2 ပထမဆုံး မြင်သာသော အထောက်အထား
3 အလားတူ တွင်းနက်နှစ်ခု
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီရှိ တွင်းနက်၏ ပုံကို ရိုက်ယူပါ။
၎င်းသည် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသော အလွန်ပြောင်းလဲနိုင်သော ဓာတ်ရောင်ခြည်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော Sagittarius A* ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ၎င်း၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် အယ်လဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြုခဲ့ကြသော်လည်း၊ ယခုအောင်မြင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပုံများကို တင်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်။.
The Astrophysical Journal Letters ၏ အထူးထုတ်ဝေသည့် စာတမ်းများအပြင် Event Horizon Telescope (EHT) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့သည် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ တပြိုင်နက်တည်း နိုင်ငံတကာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများတွင် ယနေ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
"ဒါဟာ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ တွင်းနက်ကြီး Sagittarius A* ရဲ့ ပထမဆုံးပုံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် နေထက် အဆ ၄ သန်း ပိုမိုကြီးမားသည်။. သူတို့တည်ရှိမှုရဲ့ ပထမဆုံး တိုက်ရိုက်မြင်သာတဲ့ သက်သေကို ကျွန်တော်တို့ ပေးပါတယ်” ဟု Harvard Astrophysicist A Center Research Fellow ဖြစ်သူ Sara Issaoun က ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ မြူးနစ်မြို့ရှိ European Southern Observatory (ESO) ရုံးချုပ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ရလဒ်များက အရာဝတ္တုသည် တွင်းနက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူပြီး ဂလက်ဆီအများစု၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသော ဤဧရာမကြယ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အဖိုးတန်သောသဲလွန်စများကိုပေးစွမ်းသည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွင် ပါဝင်သော စင်တာ 300 မှ သိပ္ပံပညာရှင် 80 ကျော်၏ အဆိုအရ အဆိုပါ ဧရာမတွင်းကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်းထက် မကျယ်သော ဒေသတစ်ခုတွင် နေရောင်ခြည် အလေးချိန်4သန်းခန့် အလေးချိန်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် ၂၇၀၀၀။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်အရ၊ ၎င်းသည် ကောင်းကင်၌ လပေါ်ရှိ ဒိုးနပ်အရွယ်အစားဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး မြင်သာသော အထောက်အထား
ပုံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီ၏ဗဟိုရှိ ဧရာမအရာဝတ္တုကို နှစ်ရှည်လများစောင့်မျှော်နေသည့်ပုံဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ တွေ့ဖူးတယ်။ ကြယ်များသည် နဂါးငွေ့တန်း၏အလယ်ဗဟိုရှိ အလွန်ကြီးမား၍ ကျစ်လစ်ပြီး မမြင်နိုင်သော အရာဝတ္ထုအချို့ကို လှည့်ပတ်နေသည်။ ယင်းက ကောင်းကင်ကိုယ်ထည် Sadge A* သည် တွင်းနက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာ အကြံပြုထားသည်။
တွင်းနက်သည် လုံးဝမှောင်နေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် မမြင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကိုပတ်၀န်းကျင်ရှိ တောက်ပသောဓာတ်ငွေ့များက ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ကို ဖော်ထုတ်ပေးသည်- တောက်ပသောလက်စွပ်ပုံစံဖြင့် ဝန်းရံထားသည့် အလယ်ပိုင်းဒေသ (အရိပ်ဟုခေါ်သည်)။ မြင်ကွင်းအသစ်သည် တွင်းနက်၏ အားကောင်းသော ဆွဲငင်အားကြောင့် ကွေးညွှတ်နေသော အလင်းရောင်ကို ဖမ်းယူသည်။
"လက်စွပ်အရွယ်အစားဟာ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီရဲ့ ခန့်မှန်းချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အတွက် အံ့သြမိပါတယ်" ဟု ထိုင်ပေ၊ Academia Sinica၊ Institute for Academy and Astrophysics မှ EHT ပရောဂျက်၏ သိပ္ပံပညာရှင် ဂျက်ဖရီ ဘိုဗာက ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒီမကြုံစဖူး စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဂလက်ဆီဗဟိုချက်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာကို နားလည်သဘောပေါက်လာစေပါတယ်။ တွင်းနက်ကြီးများသည် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ပေးဆောင်ပါ။"။
ထိုသို့သော ဝေးကွာသော အရာဝတ္တုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ကမ္ဘာမြေအရွယ်အစား တယ်လီစကုပ်တစ်ခု လိုအပ်သော်လည်း၊ EHT သည် အောင်မြင်နိုင်သည် ။ ၎င်းတွင် ချီလီ၊ အမေရိကန်၊ မက္ကဆီကို၊ စပိန်နှင့် တောင်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်ရှိသော ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ် ရှစ်ခု ပါဝင်သည်။ USA တွင် European Southern Observatory (ESO) နှင့် Chile ရှိ Atacama သဲကန္တာရရှိ အခြားသော နိုင်ငံတကာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး Europe ရှိ Sierra Nevada (Granada) ရှိ Millimetric Radio Astronomy (IRAM) သည် ထင်ရှားသည်။
EHT သည် Sagittarius A* ကို ညပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက် စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး အငြိမ်ကင်မရာတွင် ရှည်လျားသော အလင်းဝင်ပေါက်များကို အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ နာရီပေါင်းများစွာ ဒေတာစုဆောင်းခဲ့သည်။ ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်များထဲတွင် EHT၊ IRAM အင်တာနာ၊ မီတာ 30 အရှည်သည် လေ့လာကြည့်ရှုမှုတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ပထမပုံများကိုရယူရန်ခွင့်ပြုခြင်း။
မှန်ဘီလူးများအစား သင်္ချာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုသည့် အလွန်ရှည်လျားသော ကိုးကားမှု interferometry (VLBI) ဟုခေါ်သော နည်းပညာအားဖြင့် ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်အားလုံးမှ အချက်ပြမှုများကို ပေါင်းစပ်ပြီး အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် အယ်လဂိုရီသမ်များနှင့် စူပါကွန်ပြူတာများမှ ၎င်းတို့၏ အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Andalusian Institute of Astrophysics (IAA-CSIC) မှ သုတေသီ Thalia Traianou က "နည်းပညာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား တွင်းနက်များနှင့် ရုပ်ရှင်များပင်လျှင် ပုံအသစ်များကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။"
87 ခုနှစ်တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော နဂါးငွေ့တန်း M2019 ရှိ တွင်းနက်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံပညာရှင်များက တွင်းနက်နှစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီရှိ တွင်းနက်ဖြစ်သော်လည်း အလွန်ဆင်တူကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် အလင်းနှစ် ၅၅ သန်းအကွာတွင်ရှိသော M1000* ထက် အဆ 87 ပိုသေးငယ်ပြီး ကြီးမားသည်. ဧရာမ ကြယ်ကြီးတွင် နေ 6.500 ဘီလီယံ ထုထည်ရှိပြီး အချင်း 9.000 ဘီလီယံ ကီလိုမီတာ ရှိသည် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ နက်ပကျွန်း ကျွန်းအထိ ဆိုလာစနစ် သည် ၎င်းထဲသို့ ဝင်ရောက် မည်ဖြစ်သည်။
"ကျွန်တော်တို့မှာ လုံးဝကွဲပြားတဲ့ ဂလက်ဆီအမျိုးအစားနှစ်ခုနဲ့ အလွန်ကွဲပြားတဲ့ တွင်းနက်နှစ်ခုရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီတွင်းနက်တွေရဲ့အစွန်းနားမှာတော့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ဆင်တူပါတယ်" ဟု EHT သိပ္ပံကော်မတီ၏ ပူးတွဲဥက္ကဌနှင့် သီအိုရီနက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ရူပဗေဒပါမောက္ခ Sera Markoff က ပြောကြားခဲ့သည်။ အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်တွင်။ ယေဘူယျ နှိုင်းရဓာတ်သည် ဤအရာဝတ္တုများကို အနီးကပ် အုပ်စိုးပြီး တွင်းနက်ဝန်းရံထားသော အရာများ၏ ခြားနားချက်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဝေးတွင် တွေ့ရသည့် ခြားနားမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်။ »
သီအိုရီ ရူပဗေဒပညာရှင် နှင့် Barcelona တက္ကသိုလ် ၏ စကြာဝဠာဗေဒ သိပ္ပံ မှ ICREA ပါမောက္ခ Roberto Emparan က SMC Spain ကို ဤသို့ရှင်းပြသည် - "လောလောဆယ်မှာ၊ M87* ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကြားက တူညီတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ လက်ရှိပုံသည် SgA* မှ ဆင်းသက်လာပြီး ၎င်းသည် တွင်းနက်၏အရွယ်အစားကို မခွဲခြားဘဲ၊ တွင်းနက်နှင့် အနီးဆုံးပတ်ဝန်းကျင်သည် အလွန်ဆင်တူသည်။. အနာဂတ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည် တွင်းနက်ဝန်းကျင်ရှိ အရာဝတ္တုများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုမိုပြောပြနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အရာဝတ္ထုသည် အိုင်းစတိုင်း၏ သီအိုရီကို ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း၊ သို့မဟုတ် ပိုမိုဆန်းပြားသော ' imposter' သို့မဟုတ် 'copycat' ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြောပြနိုင်ပါသည်။
University of Valencia နှင့် CSIC ၏ Hybrid Center ၏ သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ ရူပဗေဒဌာနနှင့် IFIC ဌာနမှ ပါမောက္ခ Gonzalo J. Olmo နှင့် Complutense University of Madrid ၏ သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ ရူပဗေဒဌာနမှ Talent researcher Diego Rubiera-García တို့ တိုက်ဆိုင်ပါသည်။ "ဤအရာဝတ္ထုသည် နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီတွင် ယနေ့တွေ့မြင်ရသည့် အရာများထက် အဆတစ်ထောင် ပိုကြီးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ 'တွင်းနက်ငယ်' နှင့် ၎င်း၏ဆင်တူမှုသည် ဤအရာဝတ္ထုများကို ဖော်ပြသည့် ရူပဗေဒ၏ ယေဘူယျသဘောကို ပြသသည်" ဟု ၎င်းတို့က SMC Spain ကို အလေးပေးဖော်ပြသည်။
သို့သော် ယနေ့ရလဒ်များသည် M87* ထက် ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။ Sagittarius A* က ပိုနီးပေမယ့်။ အဖွဲ့သည် Sgr A* ဝန်းကျင်ရှိ ဓာတ်ငွေ့များ၏ ရွေ့လျားမှုကို ရှင်းပြရန် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ကိရိယာအသစ်များကို တီထွင်ရန် လိုအပ်သည်။ M87* သည် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်သော မှန်ဘီလူးဖြစ်သော်လည်း ပုံအားလုံးနီးပါးသည် တူညီသော်လည်း Sgr A* သည် မဟုတ်ပါ။
“တွင်းနက်နားက ဓာတ်ငွေ့တွေဟာ အလင်းလို မြန်မြန်နီးပါး၊ Sagittarius A* နဲ့ M87* အနီးမှာ တူညီတဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေပါတယ်” ဟု တက္ကသိုလ် Steward Observatory and Astronomy and Data ဌာနမှ EHT သိပ္ပံပညာရှင် Chi-kwan Chan က ရှင်းပြခဲ့သည်။ အရီဇိုးနားပြည်နယ်၊ ပိုကြီးသော M87* ကို ပတ်ရန် ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာသည့် ဓာတ်ငွေ့သည် သေးငယ်သော်လည်း Sagittarius A* သည် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပြီးမြောက်သည်။"
"ဆိုလိုတာက Sagittarius A* ပတ်၀န်းကျင်က ဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့ တောက်ပမှုနဲ့ ပုံစံက EHT ကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေပါတယ်- အမြီးကို အလျင်အမြန်လိုက်နေတဲ့ ခွေးကလေးရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ပုံကိုရဖို့ ကြိုးစားတာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။သူကဆက်တယ်။
Sgr A* black hole ပုံသည် အဖွဲ့မှထုတ်နုတ်ထားသော မတူညီသောပုံများ၏ပျမ်းမျှပုံဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီ၏အလယ်ဗဟိုရှိ ဧရာမကြယ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီရှိ တွင်းနက်မှ ရိုက်ကူးထားသော ပုံများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » နက္ခတ္တဗေဒ » ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီရှိ တွင်းနက်ပုံ
Meridians ဆိုတာ ဘာလဲ။